Welcome to Aayaha Nolosha » GABADHII CAQLIGA BADNEYD…!!
GABADHII CAQLIGA BADNEYD…!!
June 9, 2018 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Gabadh ninkeeda uga caal weysay inuu salaadda tukado, wax kasta oo ay u sheegtay iyo si kasta oo ay u waanisay uu ka diiday inuu salaad tukado ayaa qorshe layaab leh u degtay, iyadoo caqli adeegsanaysa.
Waxay u sheegtay Ninkeeda in ay xanuunsan tahay oo ay u baahan tahay Qur’aan saar, kadibna wuxuu u geeyay Nin sheekh ah oo xarun Qur’aan saar ay u furnayd, kadib markii Qur’aan akhriska lagu bilaabay gabadhii ayaa iyadoo iska dhigaysa in uu Jin ka dul hadlayo waxay tiri “Sheekhoow aniga waan ka baxaa gabadhan, laakin hal Shuruud ayaan wataa”
Sheekhii marka hore waa uu ka diiday shuruuddaas oo inuu shuruud la’aan ka baxo ayuu isku dayay, balse mar dambe ayuu ka aqbalay oo yiri:- “Bal sheeg Shuruuddu maxay tahay?”, Jinkii ayaa yiri:- “Gabadha waan ka baxayaa, laakiin Ninkeeda ayaan gelayaa”.
Ninkii Gabadha qabay oo meesha fadhiyay hadalka Jinka markuu maqlay ayuu argagaxay, Sheekhiina Jinka wuu ka diiday arrintaasi, balse Jinkii ayaa Sheekhii ku yiri:- “Sheekhoow ma garanaysaa sababta aan u doonaayo inaan u galo Ninka?”, Sheekhii ayaa yiri:- “Bal ii sheeg sababta”. Jinkii ayaa yiri:- “Sheekhoow ninkaan Salaadda ma tukado, ninkii ayaa soo booday oo yiri:- “Beentiisa waaye Sheekh”.
Sheekhii ayaa kolkaas ku yiri Jinkii:- “Gabadha ka bax, gurigoodana haka fogaan, hadduu Tukan waayo Ninka gal oo ka dhex qeyli, Jinkii baa yiri:- “Hagaag taas ayaa inoo ballan ah.
Gabadhii oo horeyba aan u xanuunsanayn qorshena ka wadatay arrinkii, iyadoo tacbaan ah ayaa xarunta la keenaye, markii Sheekhii arrinkaa ku taliyay, iyadoo lugaheeda ku socota oo dig-digleynaysa ayay gurigeedii tagtay.
Muddo kadib gabadhii waxay wacday Sheekhii, iyada oo u mahad celinaysa, Sheekhii ayaa yiri:- “Bal ka waran Ninkii”?, Gabadhii ayaa ugu jawaabtay:- “Sheekhoow Masaajidkaba isaga ayaa Fura, oo Mu’adinkaba isagaa ka horreeya”.
Sheekhii ayaa yiri “Allah ayaa Hanuunka leh” inta ay gabadhii qososhay ayay Sheekhii ku tiri “Sheekhoow waa run oo Alle ayaa hanuunka leh, laakiinse meelba leygama heyn, Jinina iguma jirin, kaliya waxaan rabay inuu ninkeygu Salaadda tukado, waayo Tukashada ayaan ku kari waayay, balse haatan salaadda kama tago oo Masjidka ayuu Shanta salaadood ku tukadaa”.